DHEGEYSO-Soomaaliya oo shir caalami ah kaga qaybgashay New York. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Soomaaliya oo shir caalami ah kaga qaybgashay New York.
Seteembar 22, 2016 12:12 b 0
New York, Sep 22 2016–Magaalada New-York ee Dalka Mareykanka waxaa ka lagu soo gaba gabeeyay shirkii Guud ee Qaramada Midoobay, kaas oo ay ka qeyb galeen madax ka kala socotay Caalamka.
Shirkan lagu soo gaba gabeeyay Magaalada New-York ee Dalka Mareykanka ayaa waxaa hareer socday kulamo gaar gaar ah oo quseeyay arrimaha kala duwan ee caalamka ka dhacaya oo ay ugu horeyso arrimaha Qaxootiga.
Wasiirkada Arimaha Dibadda Dowladda Federaalka Soomaaliya Cabdisalaan Cumar Hadlliye, ayaa halkaasi ka jeediayay khudbad la xiriirta xaaladda Qaxootiga Soomaaliyeed, maadama Kenya ay wado qorshe lagu xirayo Xerada ugu weyn ee Dhadhaab, taasoo ay ku jireen Kumanaan Kun.
DHEGEYSO-Hooyo codsatay in laga caawiyo daweynta wiil 9 sano xanuunsan.
Ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed oo cambaareeyey xanibaadii suxufiyiinta ee Muqdisho.